What's Social Media ? And That is You should know about it and to try to
What is Social Media? ဆိုရှယ်မီဒီယာဆိုတာဘာလဲ?
Social Mediaတှင် Media ဆိုသည်မှာ ပြင်သစ်ဘာသာစကားမှ ဆင်းသက်လာပြီး ကြားခံနယ်ဟူ၍ အဓိပ္ပာယ်ရသည်။ ယခုခေတ်တွင် Media မှာ အမျိူးအစား နှစ်မျိူးကွဲထွက်ပေါ်ပေါက်လာသည်။ Traditional Media နှင့် ဆိုရှယ်မီဒီယာ ဟူ၍ဖြစ်သည်။ Traditional Media သည် TV, Radio, Magazine, Journal, Brochure ,etc .. စသည်တို့ကို အသုံးပြု၍ အများပြည်သူသိအောင် ကြေညာထုတ်ဖော်ခြင်းဖြစ်သည်။
ဆိုရှယ်မီဒီယာ ဆိုိသည်မှာ Internet network ကို အသုံးပြု၍ လူအများသိအောင် ထုတ်ဖော်ကြေညာခြင်းဖြစ်သည်။
ဆိုရှယ်မီဒီယာ ထဲတွင် Facebook, Twitter, LinkedIn, YouTube, Blogger, Google+, etc… စသည်တို့ပါဝင်သည်။
ဆိုရှယ်မီဒီယာ ၏ အားသာချက်များမှာ
customers များထံမှ Feedback များကို တိုက်ရိုက်ရရှိနှိုင်ခြင်း
မိနစ်တိုင်း စက္ကန့်တိုင်း available ဖြစ်နေခြင်း
မိမိပေးလိုသော Information များကို ထိရောက်စွာပေးနိုင်ခြင်း အစရှိသည် အကျိုးကျေးဇူးများ ရရှိနိုင်ပါသည်။
Related Articles- အင်တာနက်နှင့်ပတ်သတ်ပြီးသင်မသိသေးတဲ့အချက်(၅)ချက်
bluray : February 10, 2021 at 5:14 am
I was able to find good info from your blog posts. Jayne Jean Marr